Muxuu xaaladda gobolka ka beddeli karaa isfahanka dalalka Eritrea & Ethiopia? | allsaaxo online
Muxuu xaaladda gobolka ka beddeli karaa isfahanka dalalka Eritrea & Ethiopia?
Dalalka Geeska Afrika waxaa saamayn Nololeed iyo mid Nabadgeliyo ku yeeshay Colaadaha Mandiqadda ka socday dhowr iyo labaatankii sanno ee la soo dhaafay.
Deganansho La’aanta waxay horseeday inay Dagaaalo caynba-cayn ah ka dhacaan inta badan dalalka ku teedsan Geeska Afrika, iyadoo colaadaha ugu samaynta badnaa kala ahaayeen Dagaalki ilagu hoobtay ee Ethiopia iyo Eritrea dhex maray sannadihi 1998-dii ilaa 2000, Dagaalka Kooxaha ku hardamaya dalka Koonfurta Sudan iyo Colaadaha aan dhamaadka lagayn ee weli ka socda gudaha Somalia.
Inkastoo Dagaalkii Ethiopia iyo Eritrea uu dhamaaday muddo haatan laga joogo 18-sanno, haddana ma jirin Heshiis Siyaasadeed oo ay Madaxda dalalkaasi ka gaareen Xilli-colaadeedkii ay Dadyowga labada dhinac ku riiqmeen.
Haddaba, Isbedelka cusub ee ay Dowladaha Ethiopia iyo Eritrea doonayaan inay kaga gudbaan Colaadihii soo maray ayaa la sheegay inay tahay Tallaabo wanaagsan oo wax badan ka beddeli kartta Deganaanshaha Siyaasadeed iyo Colaadaha ay labadaasi Dowladood ku lug leeyihiin ee ka aloosan Mandiqadda.
Ra’isul-wasaaraha Isbedel-doonka Ethiopia, Abiy Axmed oo xilkaasi loo doortay bishii April ee la soo dhaafay waxa uu garwaaqsaday in laga gudbo Isbaaro-siyaasadeedka ka dhashay Dagaalkii ay la galeen Eritrea.
Waxa uu si cad usheegay inuu doonayo inuu la heshiiyo Dowladad Eritrea iyo inuu Ciiddankiisa ka soo saarayo Degmadda Badme oo ay Milliteriga Ethiopia ka qabsadeen Eritrea.
Madaxweynaha muddada dheer ka talinayey dalka Eritrea, Issias Efewerki waxa uu sopo dhaweeyey Nioyad-wanaagga Ra’isul-wasaaraha da’da yar ee Ethiopia, Abyi Ahmed, kaasi oo shalay markii ugu horreysay booqasho rasmi ah ku tegay caasimadda dalka Eritrea ee Asmara.
Is-fahamka Siyaasadeed ee Ethiopia iyo Eritrea ayaa la saadaalin Karin inuu wax ka bedeli karo Jawi haatan ka aloosan Mandiqadda, gaar ahaan Dagaalka Somalia iyo muranka Eritrea iyo Jabuuti ee Lahaanshaha Jesiiradda Dumeyra oo u dhow Gacan-biyoodka Baabul-mandabka ee Koonfurta Badda Cas.
Milliteriga labada Waddan waxaa uu iska horimaad ku dhex maray xuduudka sannadkii 2008-kii, iyado oDowladad Qatar ku guuleysatay inay Ciiddamo Nabad-ilaalin kala dhex dhigto xuduudka labadaasi Waddan.
Dowladda Eritrea waxaa docda kale saaran Cunaqabataynta QM ee Hubka, kadib, markii Dowladda Eritrea lagu eedeeyey inay ku lug leedahay Dagaalka ka socda Somalia, isla markaana ay Alshabaab siiyaan teegeerao Milliteri iyo mid Dhaqaale.
Balse, Dowladda Eritrea waxay beenisay Eedeymahaasi, iyadoo Kormeerayaashs QM ee Cunaqabataynat Hubka ee saaran Somalia iyo Eritrea sheegeen inaysan haynin caddaymo muujinaya inay Eritrea taageeraan Dagaalamyaasha Alshabaab ee dagaalka kula jira DFS iyo Ciiddanka AMISOM.
Hoggaamiyayaasha dalalka Afrika waxay horey u go’aansadeen in Eritrea laga saaro xubinnimadda Ururka Midowga Afrika iyo in la saaro Go’doomin Siyaasadeed.
Dowladda Ethiopia ayaana loo aaneeya inay Midowga Afrika ku riixeen inay Eritrea go’aamiyaan sababo la xiriiray Khilaafkii Siyaasadeed ee kala dhexeeyey.
Xeeldheerayaasha ayaa rumeysan in Dowladda Eritrea haysato Fursad Caalami iyo mid Gobaleed, si ay mar kale ugu soo muuqato Masraxa Siyaasadda iyo Kulamadda Ururradda Caalamiga, waxaana hor yaalla Fursad ay ku heshisiin karto Dowladda Ethiopia iyo Ururka Xoreynta ee ONLF, oo ay Madaxdooda haatan ku sugan Caasimadda Eritrea ee Asmara.
Si kastaba ha ahaatee, Dowladda Eritrea door ma ku yeelan kartaa inay Dowladaha Gobalka heshiis siyaasadeed la gaarto Dowladda Federalka Somalia iyo Dowladda Jabuuti iyo inay gacan ka geystaan xal-u-helista dagaallada ka socda Somalia, Koonfurta Sudan iyo muranka Xuduudka eek ala dhexeeya Jabuuti.